Tani waa mid kamid ah dhibaatooyiinka kajira Dalka ee Niger. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Tani waa mid kamid ah dhibaatooyiinka kajira Dalka ee Niger.
Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay weerarro looga shakisan yahay in mintidiintu ka geysteen gobolka Tahoua ee galbeedka Niger Axaddii, saacado kadib markii maxkamadda dastuurka ay ansaxisay doorashadii Maxamed Bazoum oo noqoneya madaxweynaha Cusub ee Dalkaas.
Madaxweynaha xilka kasii degaya Mahamadou Issoufou ayaa dhacdada ku tilmaamay “waxashnimo” isagoo tacsi u diraya bulshooyinka ay dhibaatadu saameysey ee Tillia.
“Wax walba waxaa loo sameynayaa si loo hubiyo in dembiyadan aan loo ciqaabin,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter.
Kooxda weerarka geysatey ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen tuulooyinka Intazayene, Bakorate, ceelka Wirstane iyo xeryaha ku dhow Akifakif, oo dhammaantood ku yaal meel u dhow xadka Mali, sida lagu sheegay bogga wararka ee Actu Niger.
Waxay intaas ku dartay in mintidiin lala xiriirinayo dowladda Islaamiga ah ee Saxaraha Weyn (ISGS) ay ka howlgalaan aagga.
Actu Niger ayaa ku warameysa in iska hor imaad uu ku dhex maray askarta Niger iyo kuwa weerarka soo qaaday mid ka mid ah tuulooyinka la bartilmaameedsaday ka dib markii ciidamo xoojin militari ah loo diray aagga.
Madaxweynaha soo socda ee Mohamed Bazoum ayaa cadaadis la saarayaa inuu wax ka qabto dilalka sii kordhaya ee rayidka ee ka socda gobolada galbeedka ee xasaradaha badan ee Tahoua iyo Tillaberi, iyo koonfurta-bari ee gobolka Diffa weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada ka socda dowladda Islaamka, kooxda Sahel ee al-Qaacida iyo kooxda Boko Haram ee Nigeria.
Dhacdadii ka dhacday Tahoua waxay imaaneysaa toddobaad uun ka dib markii ku dhowaad 60 qof oo rayid ah lagu dilay deegaanka Tibberi ee Banibangou oo u dhow xadka ay la wadaagaan Mali.
Markii la gaaro wareegii labaad ee doorashada madaxweynenimada 21-kii Febraayo, in ka badan 100 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar aan la sheegan oo ka dhacay laba tuulo oo ka tirsan Tillaberi. Maalintii doorashada, toddobo wakiil oo ka tirsan codbixinta ayaa lagu dilay weerar IED ah oo ka dhacay isla gobolkaas.
Previous articleQisa Cajiib ah oo ku dayasho Mudan
Next article30 sano ka dub Soomaliya Awood Milatari ma lagu xukumi karaa
Ciidanka Puntland oo sheegay inay dileen Khaalid Jaamac Usmaa oo...
Ciidanka Xoogga Puntland ee PSF, ayaa shaaciyay in ay hawlgal qorshaysan ku dileen sarkaal ajnabi ah, oo ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan...
Qarax ka dhacay Muqdisho oo dhimasho i sababay dhashay
India oo sheegtay in Soomaaliya ay ugu deeqday shixnad talaalka Coronovirus...
Qoor-Qoor oo soo dhaweeyey go’aanadii ka soo baxay guddigii farsamada...
Taliyahii hore ee Nabad sugida oo taageeray shirkii Hawiye ee...